Netpeak Checker: SEO Bulk Research on Root Domains iyo Pages
Axad, Agoosto 11, 2019 Talaado, Maarso 31, 2020 Douglas Karr
Shalay, waxaan la kulmay barnaamij hagitaan ah oo i weydiistay inaan ka caawiyo iyaga sidii ay ugu tababari lahaayeen ardaydooda hagaajinta mashiinka raadinta. Su’aashii ugu horreysay ee aan weydiiyo waxay ahayd: Maxaad u malaynaysaa inuu SEO yahay? Waa su'aal muhiim ah maxaa yeelay jawaabta ayaa toosin doonta haddii aan caawin karo iyo inkale. Mahadsanid, waxay ku jawaabeen inaysan lahayn khibrad ay kaga jawaabaan su'aashaas ayna ku tiirsanaan doonaan aqoontayda. Sharaxaaddayda SEO waa qurux badan tahay